အသေးစား အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သိန်း ငါးထောင်ခန့် ချေးယူနိုင်မည့် JICA ၏ ဒုတိယအ? - Yangon Media Group
အသေးစား အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သိန်း ငါးထောင်ခန့် ချေးယူနိုင်မည့် JICA ၏ ဒုတိယအ?
အသေးစား အလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သိန်းငါးထောင်ခန့်ချေး ယူနိုင်မည့် JICA ၏ ဒုတိယအကြိမ် ချေးငွေကို လာမည့်နှစ်မတ်လတွင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ JICA ၏ SME ချေးငွေကို အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သို့ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ရာ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ရရှိပါက လေ့လာအကဲဖြတ်မှုပြုလုပ်၍ မတ်လတွင်အသေးစားအလတ် စားလုပ်ငန်းရှင်များကို ထုတ်ချေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုး ရေးဘဏ်မှ CEO ဒေါက်တာဇေယျာညွှန့်ကပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်က UMFCCI ရှိ မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ် သူများအသင်းတွင်ပြုလုပ်သည့် အသေးစားအလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် SME ချေးငွေများချေးပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ်များ တင်ပြခြင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် မီဒီယာများကို¤င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ JICA အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည် နယ်တို့ရှိ SME လုပ်ငန်းရှင်များကို ဦးစားပေးချေးပေးစေချင်သည့်အတွက် အချို့ကိုနယ်ဒေသများမှာ SME လုပ်ငန်းများကိုချေးမည်ဖြစ် ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်း မွန်ပြီးခိုင်မာသည့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ SME လုပ်ငန်း ရှင်များကို ဦးစားပေးချေးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာဇေယျာညွှန့်ကပြောသည်။
” JICA ကလည်း နယ်ဒေသ တွေကို ဦးစားပေးချေးစေချင်တယ်။ ဘဏ်ကလည်း ရန်ကုန်ကိုပဲဦးစား ပေးချေးချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နေတာကို နှစ်ခုစလုံးကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ပါမယ်။ JICA ကပေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ သူဖြစ်စေချင်တဲ့လမ်းကိုလည်း လျှောက်ပေးရပါ မယ်။ နိုင်ငံတော်ကဖြစ်စေချင်တဲ့လမ်းရော၊ သူဖြစ်စေချင်တဲ့လမ်းရော လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရပါမယ်”ကပြောသည်။ JICA မှအသေးစားအလတ် စားလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သိန်း ၅ဝဝဝ ထက်မများသည့် ပမာ ဏသာထုတ်ချေးရန် ပြောကြားထားသည့်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များ တင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ချေးငွေထုတ် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ ဇေယျာညွှန့်ကထပ်လောင်းပြောသည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ချေးငွေရယူသည့်လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့်ယင်းတို့ရယူသည့် ချေး ငွေကိုအတိုးနှုန်း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင် နှုန်းနှင့်မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းက သတ်မှတ်ထားသည့် ပရီမီယံကြေးနှုန်းထားတို့ကိုပါ ပြန်လည်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းချေးငွေကိုရယူထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ငါးနှစ်ခွဲ၍ ပြန်ဆပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပထမ တစ်နှစ်တွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဒုတိယနှစ်တွင် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ တတိယ နှင့်စတုတ္ထနှစ်တို့တွင် ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းစီ၊ ပဉ္စမနှစ်တွင် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ပြန်ဆပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သို့ရာတွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး လျှင်ကျပ်သိန်း ၅ဝဝဝ ဆိုသည့်ပမာဏသည် အမှန်တကယ်လုပ် ငန်းလည်ပတ်နေသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လုံလောက်မှုမရှိသည့်အတွက် ယင်းပမာဏထက်ပို၍တိုး မြှင့်ချေးပေးစေလိုကြောင်း အသေးစားနှင့် အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်း ရှင်အချို့ကပြောသည်။
JICA SME ချေးငွေရယူ မည့်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်လျှောက်ထားနိုင် မည်ဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံးလုပ်ငန်းလုပ်သက်သုံးနှစ်နှင့် အထက်ရှိကာလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည့် SME လုပ်ငန်းများဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အိမ် ခြံမြေ၊ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း ဝယ်ခြင်း၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ဆေးလိပ်အ ရက်ဘီယာလုပ်ငန်း၊ လက်နက်ခဲယမ်း၊ မီးကျောက်လုပ်ငန်းများ၊ လူမှုဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေ သော ကဏ္ဍများနှင့်ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထုတ် ချေးခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ ချေးငွေအားလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောအ ဆောက်အအုံများတိုးချဲ့ဆောက် လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူများ အနက် JICA နှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ချေးငွေစည်းကမ်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှသာ စိစစ်ခွင့်ပြုထုတ်ချေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဘဏ်မှသိရ သည်။
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ကျေးရွာ ၄ဝဝဝ တွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး နည်းပညာပေး စာေ??
သထုံမြို့ ရွှေစာရံစေတီတော် ပဉ္စမအကြိမ် မြို့လုံးကျွတ် မဟာနိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော် ကျင်းပ ဒေသခံမျာ??
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဗုံးသီးဟောင်းတစ်လုံး တွေ့ရှိ
တစ်ချိန်တွင် ဘာစီလိုနာသို့ ပြန်လာမည်ဟု နည်းပြ ဂွါဒီယိုလာပြောကြား
ယီမင်နိုင်ငံတွင် ယခုနှစ် ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၄၆ဝဝဝဝ ကျော်ရှိပြီး ၇ဝ၅ ဦးသေဆုံးကြောင်း ကုလသမဂ္ဂပြောကြား